Phupha ngeNdibano Discover ➡ Discover kwi-Intanethi ▷ ➡️
Intlanganiso inokubakho ngenxa yezizathu ezahlukeneyo. Inokubizwa, umzekelo, ngokunxulumene nepati okanye umbutho. Okanye yintlanganiso yabemi ngesihloko esibalulekileyo. Into onke amabandla afana ngayo kukuba inesizathu esithile. Oku kunokuba yintlanganiso eqhelekileyo. Oku kuthetha ukuba imigaqo yombutho imisela, umzekelo, ukuba intlanganiso jikelele kufuneka ibanjwe rhoqo emva kweminyaka emibini.
Kodwa kunokuthetha ntoni xa umntu ephupha ngokudibana? Ngaba ulungiselela intlanganiso kuba kuya kufuneka unike intetho apho? Okanye ngaba sikho esinye isizathu? Ngaba intlanganiso yaphazanyiswa ephupheni? Xa utolika, kubalulekile nokuba umntu uthatha inxaxheba okanye uthatha inxaxheba okanye inkokeli yentlanganiso.
1 Uphawu lwephupha «indibano» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «indibano» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ukuhlangabezana» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «indibano» - ukutolikwa ngokubanzi
Kutoliko jikelele lwamaphupha, ukujongwa kwentlanganiso kunokubonwa njengophawu lwephupha. iimeko zobungcali bonisa, ukuba kuyonwabisa kakhulu ukuphupha.
Ngapha koko, uphawu lwephupha "ibandla" lithetha umanyano olomeleleyo nolonwabileyo kwi el mundo yomlindo. Ngamanye amaxesha uphawu lwephupha lunokubonisa ukuba iphupha alihoyanga umdla wakho ekuvuseni ubomi. Ngenxa yoko, kuye kwavela izehlo ezingathandekiyo, ekufuneka ziphendulwe ngoku.
Ukuba umphuphi unentlanganiso ephupheni okanye uzimase enye, mhlawumbi nanjenge-freemason, oku kuhlala kukhomba kwiingxabano ezingathandekiyo phakathi kwabahlobo. Intlanganiso enesiphithiphithi okanye engathandekiyo njengophawu lwephupha, kwelinye icala, ukuphoxeka. Kwelinye icala, uphawu lwephupha apha lumkisa ngeengozi ezingeyomfuneko abaphuphi abangathanda ukuzibandakanya nazo.
Ukongeza, isizathu sokuba iphupha lithathe inxaxheba entlanganisweni ephupheni kubaluleke kakhulu ekutolikweni kwephupha ngokubanzi. Ngaba omnye wayechasene okanye ekhetha imicimbi exoxwe kwintlanganiso yephupha? Kwimeko nayiphi na into, uphawu lwephupha apha lubhekisela kwinto ethile Groll kwihlabathi lokuvuka, ekufuneka umphuphi athathele ingqalelo ngakumbi.
Ukuba ubona intlanganiso yamagcisa ephupheni, oku kungabonisa intlanganiso engathandekiyo ebomini bokuvuka, nto leyo eya kuthi izise iimbambano neengxaki. Ukuba umphuphi uthetha phambi kwentlanganiso yeentatheli, oku kungabhekisa kumnqweno wokudlulisa ulwazi oluthile.
Uphawu lwephupha «indibano» - ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwengqondo ephupheni kutolika iphupha apho umntu ophuphayo eziva ethetha entlanganisweni, njengophawu lokuba akanabaninzi ebomini bokuvuka. Amagama kufuneka uyenze. Ngaphandle koko, unokukhawuleza ubizwe ngokuba ngumhlebi okanye umntu ongathembekanga.
Ngamanye amaxesha kusengqiqweni ngakumbi kwabo baphupha kwihlabathi elivukayo ukuba bawalinganise amagama abo ngononophelo kwaye bafike kwinqanaba ngokufutshane nangokufutshane. Ngenxa yoko, uyabonwa ngendalo esingqongileyo njengomntu onobuchule kwaye unokuqinisekisa abanye abantu ngezimvo zakho.
Uphawu lwephupha «ukuhlangabezana» - ukutolika kokomoya
Ukusuka kwindawo yokomoya, uphawu lwephupha 'ibandla' linokubonwa njengesiko kubomi beklabhu kwaye ke libhekisa kwinxalenye ebalulekileyo yeklabhu. ukuqonda ngokomoya.
Iphupha malunga neTherme
Phupha malunga nesipaji